သမီးလေး မွေးနေ့ကိတ် – Thet Nandar
Posted on February 8, 2013 July 3, 2014 by Thet Nandar
Angel’s Birthday Cake
မနှစ်ကလည်း သမီးက သူ့မွေးနေ့ကိတ်မုန့်ကို သူ ကိုယ်တိုင် ကိတ်မုန့်ဖုတ်သလို .. ဒီနှစ်လည်း သူ့မွေးနေ့ကိတ်မုန့်ကို သူ ကိုယ်တိုင်ပဲ ကိတ်မုန့်ဖုတ်တယ်။
သမီးက ကိတ်မုန့်ဖုတ်တာ ၀ါသနာ ပါတယ်။
ကိုယ်က ချဉ်၊ ငံ၊ စပ် ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ ကိတ်မုန့်ကို သိပ်မကြိုက်ဘူး။
ဘယ်လိုပြောရမလဲး .. အဲဒီ အရသာ သိပ် မကြိုက်ဘူး။
ချဉ်၊ ငံ၊ စပ်တို့ ဘာတို့ကျတော့ စားလိုက်ရင် စိတ် ဘ၀င်ကျသွားတယ်။ အဲဒီ ကိတ်မုန့်တွေကျတော့ တခါတရံပဲ စားဖြစ်ပါတယ်။
အခု လောလောဆယ်တော့ ကိတ်မုန့်တွေထက် ချဉ်ချဉ်၊ ငံငံ၊ စပ်စပ် အရသာတွေကို ပိုကြိုက်တယ်။
သမီးကတော့ ကိုယ် နှင့် ဆန့်ကျင်ဖက် ကိတ်မုန့်တို့ ကွတ်ကီးတို့ အရမ်းကြိုက်သလို အရမ်းကို မုန့်ဖုတ်ချင်တယ်။ ၀ါသနာ အရမ်းပါတယ်။
ကိတ်မုန့်ဖုတ်ပီး ကိတ်ခရမ်သုတ်တာလည်း သူ့ကိုယ်တိုင်ပဲ .. ခရမ်တွေကို ဓါးဖြင့် ညီအောင် ညှိနေတာ ညှိလို့ မရတာနှင့် သူ့ဘာသာ သူ Youtube search လုပ်လိုက်တာ ခရမ်တွေ ကိတ်မုန့်ပေါ်မှာ ညီအောင် ညှိဖို့ စကူ အထူကို သုံးပီး ကိတ်ခရမ်တွေ ဆွဲ ညှိပေးပါဆိုတာနှင့် သူ့ သေ သေချာချာ ညှိနေတာလေ …
ချောကလက်ဆန်တွေလည်း သူ့ဘာသာ သူ လိုက်တပ်နေတာ ..
အိမ်က ကွန်ပြူတာမှာ Parental controls လုပ်ထားတာမို့ ကလေးများ စိတ်ချ လက်ချ internet – search အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
ဒီနှစ် သမီးလေး မွေးနေ့မှာ အလုပ်တွေ အရမ်း၇ှုပ်နေတာနဲ့ မွေးနေ့ ပူပေါင်း အလှဆင်ဖို့ အချိန်များများ မရှိဘူး။ ဒါနဲ့ ပန်းဆိုင်မှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင် မိုးပျံပူပေါင်း ပန်းရောင် တစ်ဒါဇင် မှာလိုက်တယ်။ ဒါဇင်ဝက်လည်း ၀ယ်လို့ ရပါတယ်။ ဒီမှာ မိုးပျံ လေပူပေါင်းကို တစ်ဒါဇင် $ 10
သားသားက အခုနောက်ပိုင်း အသီးတွေ အရမ်းစားတယ်။
သူ့အတွက် မွေးနေ့ စပျစ်သီး
ကလေးများအကြိုက် ဂျယ်လီ၊ ချောကလက်၊ သကြားလုံး
ရေခဲမုန့် Friendly’s က အမေရိကားမှာ နာမည်ကြီးပါပဲ ..
ရေခဲမုန့်ကို ကိတ်မုန့်ပုံစံ ပြုလုပ်ထားတာပါ။
အကုန်လုံး ရေခဲမုန့် အရသာမို့ ကလေးများက အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ ရေခဲမုန့် ကိတ်မုန့်က ကလေးများ အများကြီး စားနိုင်တယ်။
ရေခဲမုန့် ကိတ်မုန့်မှာ အောက်ပိုင်း ကိတ်သား နေရာကို ချောကလက် ရေခဲမုန့်ဖြင့် ခဲထားပီး ..
အပေါ်ပိုင်း ကိတ်မုန့် ခရမ် နေရာကို Qwip ခရမ်အရသာဖြင့် ရေခဲမုန့် ခဲထားတာပါ။
စားလိုက်ရင် နူးနူးညံညံဖြင့် စားလို့ ကောင်းပါတယ်။
ကိတ်မုန့် အရသာလိုမျိုး မအီဘူး။
ရေခဲမုန့်ကိုပဲ ကိတ်မုန့်ပုံစံ အနေအထား ပြောင်းထားတာပဲ ရှိပါတယ်။
ဒီမှာ တော်တော်များများ ကလေး မွေးနေ့ ပါတီတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ကျောင်း မွေးနေ့ပါတီ နှင့် အိမ်နီးချင်း ကလေးများ မွေးနေ့ပါတီတွေမှာ တခါတည်း အပြီး .. ကျွေးတတ်ကြပါတယ်။
ရေခဲမုန့် လည်း ဖြစ်သလို မွေးနေ့ကိတ်မုန့်လည်း ဖြစ် …
အရသာကလည်း ကလေးများလည်း ကြိုက်တော့ ၂ မျိုး ၀ယ်ပေးစရာ မလိုတော့ဘူး။
တခုတည်းဖြင့် ပြီးသွားတာမို့ မိဘများကလည်း သဘောကျတယ်။
သမီး မွေးနေ့ စားပွဲ
မွေးနေ့ ဖယောင်းတိုင် ထွန်းလိုက်တော့ သားသားက ပြောစရာမလိုပဲ မီးသွားပိတ်နေတာ …
တခုလုံး ရေခဲမုန့် ဆိုပေမယ့် အပြင်မှာ နာရီဝက်လောက်တော့ ထားလို့ရတယ်။ အရည် မပျော်ဘူး။
မွေးနေ့ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေ လိုက် စိုက်နေတာ ..
တော်တော်များများက ထင်တတ်ကြတယ်။ ကိုယ်က သားကို ပိုချစ်မယ်လို့ …
သမီးကို ပိုချစ်တာကို …
ကိတ်မုန့် ခွဲပီးတော့ သမီးက လိပ်ပြာလေးတွေကို အတောင်ပံ ပျံနေတဲ့ ပုံစံ လုပ်ထားတယ်။
အဲဒါလေးတွေက သကြားခဲတွေပါ။ ကလေးများက သကြားလုံး စားနေကျဆိုတော့ ကြိုက်တာပေါ့နော်။
ပုစွန်သုပ် .. တုံယန် အနှစ်ဖြင့် သုပ်ထားတာ …
ကိုယ် ပိုကြိုက်သွားတာက ပဲပင်ပေါက်ကို အစိမ်းအတိုင်းပဲ ရေဆေးပီး ထည့်သုပ်တာ ( ရေနွေး မဖျော်ဘူး ) .. ရှောက်ရွက်လည်း ပါသေးတယ်။ ချဉ်၊ စပ် တော်တော် စားလို့ ကောင်းတယ်။
ကလေးများ အကြိုက် ဆာတေး ( မြေပဲဆော့စ် )
ဘဲကင် နှင့် ဂျုံဖက်ရွက်
ပုစွန် နှင့် သီဟိုဠ်စေ့ကြော်
သမီး ခေါင်းမှာ Happy birthday crown လည်း ဆောင်းထားတော့ မွေးနေ့ရှင်ဆိုတာ ပြောစရာ မလိုပါဘူး .. Restaurant က သမီး သူငယ်ချင်း စားသောက်ဆိုင်ပါ။ မနှစ်က သမီး တရုတ်နှစ်သစ်ကူး စားပွဲ သွားစားခဲ့တဲ့ ဆိုင် .. အဲဒီဆိုင်မှာ မွေးနေ့ ညစာ သွားစားကြတာ .. ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ရေခဲမုန့်ခွက်မှာ ဖယောင်းတိုင်လေး ထွန်းပေးပီး မွေးနေ့ သီချင်းဆိုပေးတယ်။ ဘေးနားက စားပွဲဝိုင်းတွေကပါ မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးကြတယ်။
အမှတ်တရ မွေးနေ့ပွဲလေးပါပဲ …
Categories: Birthday, Cake and Cookie, My kid's childhood life, U.S.A - Restaurant
7 thoughts on “သမီးလေး မွေးနေ့ကိတ်”
ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ သမီးလေးရေ။ ၁၁ နှစ်ထဲနဲ့ ကိတ်မုန့် ဖုတ်နေပြီဆိုတော့ သိပ်တော်တာပဲ။ ပြီးတော့ အလှဆင်ထားတာ အတော်လှတယ်။ အန်တီတော့ သဘောကျသွားပြီနော်။
@ Ko Ko Sein – YGN – ကျေးဇူးပါ အကို …
အကိုတို့ မိသားစု အားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ….
@ ခင်မင်းဇော် – ကျေးဇူးပါနော် … ပိုစ့်မှာ မွေးနေ့ ရက်စွဲ ထည့်ဖို့ မေ့သွားလို့ပါ။ သမီးလေး မွေးနေ့က ပီးခဲ့တဲ့ လကပါ။ မွေးနေ့ ပီး တလလောက်ကြာမှ ဒီဘက် ဘလော့မှာ ပိုစ့်တင်ဖြစ်သွားပါတယ်။
အခုခေတ် ခလေးတွေက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက .. ဂျုံတွေနဲ့ ဆော့နေကျမို့ သူတို့က မုန့်တွေ လုပ်တာ ပိုဝါသနာ ပါတယ်။ ကလေးတွေ ဆော့တဲ့ ဂျုံမှာ မိုခွက်လေးတွေကလည်း တကယ့် မုန့်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ သုံးတဲ့ မိုခွက် ပုံစံမျိုးနဲ့ တော်တော်တူပါတယ်။
၂၀၁၁ ကတည်းက သူ .. ကိတ်မုန့်ဖုတ်တယ်။ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ဘလော့မှာ တင်ထားပါသေးတယ်။
သူ့ ကိတ်မုန့် ဖုတ်ထားတဲ့ Peach cake မုန့်လုပ်နည်း ဗီဒီယိုလည်း Youtube နှင့် ဘလော့မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားပါသေးတယ်။
Ready made တွေကို ပဲ သုံးတာမို့ သူ့ အသက်အရွယ်နှင့် လုပ်တတ်နေတာလည်း ပါ ပါတယ်။
ကွတ်ကီးတို့ ဌက်ပျော်သီး muffin ပူတင်းတို့ကျ ready made တော့ မဟုတ်ပေမယ့် မွှေစက်ဖြင့် ၄ မိနစ်လောက် မွေပီး oven ထဲ ထည့် မုန့်ဖုတ်တာမို့ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။
ကျွန်မ အတပ်ပြောရဲပါတယ်။ ကလေး တယောက် ၀ါသနာ သာ ပါကြည့် ကိတ်မုန့်၊ ကွတ်ကီး၊ ပူတင်း၊ muffin ၊ ပေါင်မုန့် ၊ cup cake မုန့်ဖုတ်တတ်မှာ အသေအချာပါ။
ကိတ်မုန့်ပေါ်မှာ ကပ်တဲ့ သကြားခဲတွေ ခရမ်တွေကလည်း ready made တွေလေ .. ဂျုံမှုန့်၊ ကြက်ဥ၊ ထောပတ်၊ သကြား၊ ချောကလက် ပဲ မွှေစက်ဖြင့် မွှေပီး ရလာတဲ့ ကိတ်မုန့် ကိတ်သား ၂ တုံးကို အလယ်မှာ ပေါင်မုန့် ယိုသုတ်ပီး ထပ်သလို ထပ် .. အပေါ်ကနေ သူက ကိတ်ခရမ် ready made ကို အရောင် အနည်းငယ်ထည့်စပ် မွှေပီး ခရမ် သုပ်ထားတာ .. သူ့ ကိတ်မုန့် ကို သူ ခရမ်သုတ်ပီး ခရမ်တွေက ကိတ်မျက်နှာပြင်မှာ မညီမညာ ဖြစ်နေတော့ Youtube ကနေ ရှာပီး Youtube နည်းဖြင့် ကိတ် ခရမ်ကို thick paper ဖြင့် ဆွဲငြိပါတယ် ..
Happy Birthday Thameelay!
@June One – ကျေးဇူးပါနော် June One.
ဟုတ်တယ် သမီးက ကြီးလာတော့ တရုတ်နဲ့ ပို ပို ပီး တူလာတယ်။
ဂျွန်တို့ စင်ကာပူက တရုတ်တွေလို ရုပ်မျိုးလေ ..
ပီကင်းက တရုတ် အစစ်တွေလို ရုပ်မျိုး မဟုတ်ဘူး။
ဒီမှာတော့ သူ့ကို ကိုရီးယားနဲ့ ဆင်လို့တဲ့ …
အခု ဒီမှာ စနိုးမုန်တိုင်း စကျနေပီ .. ဒီနေ့ ကွန်နတ်တီကတ်မှာ အကုန်လုံး အိမ်ထဲမှာပဲ … အလုပ်တွေ ပိတ်၊ ကျောင်းတွေ ပိတ်ပဲ …
Happy Birthday, Angel lay.
you are so smart and beautiful now.
Your hand made cake is very great.
တော်လိုက်တာ …သမီးလေးရေ… အရင်ကထက်လဲပိုချောလာတယ်။
ပညာတွေအများကြီးတတ်ပီး မိဘကျေးဇူးသိသော သမီးကောင်းရတနာလေးဖြစ်ပါစေ..သမီးလေးရေ..
Naung Chain family.
@ Naung Chain family –
ကျေးဇူး အကြီးကြီး တင်ပါတယ်နော် …
ပေးတဲ့ဆုနှင့် ပြည့်စုံရပါလို၏ …